Waxyaabaha saxda ah waxay u shaqeeyaan si la mid ah heerka macaamiisha. Tusaale ahaan, kooxda bulshada ee jimicsiga jimicsiga Waan jeclahay laadadka waxay awood u yeelatay inay cusbooneysiiso oo ay kala soocdo astaantooda si ay uga jawaabaan dhaqsaha isbeddelka, suuqa maxalliga ah xaaladaha COVID-19 iyadoo la soo ururinayo cusbooneysiinta nuxurka ee ay duubteen in ka badan 100 ka mid ah maareeyayaashooda istuudiyaha maxalliga ah ee ku baahsan Waqooyiga Ameerika. Iyo SailGP si guul leh loogu biiriyay ciyaartoydii doonta ku safrayay adduunka oo dhan si ay ula wadaagaan waxyaabaha laga soo qabtay kaamirooyinka jirka inta lagu guda jiro tartamada
Intii lagu gudajiray safka faafa, oo aan lahayn faashad faashad saxan, the Los Angeles Dodgers Horyaalkii taxanaha ahaa ee 'MLB World Series' ayaa ku baaqay dabaaldeg farshaxan ah. Kooxda dhijitaalka ah ee kooxda ayaa isu soo uruurisay in ka badan 3,500 oo taageereyaal ah si ay ugu soo gudbiyaan fiidiyowyadooda falcelinta xilligan horyaalnimada iyaga oo adeegsanaya Greenfly, oo ay ku soo ururiyeen muuqaal fiidiyoow baraha bulshada ah.
Qiimaha kafaala-qaaduhu wuu sii dheereyn karaa xitaa si loo kaxeeyo is-beddel bulsho oo macno leh. Kooxda cricket-ka Rajasthan Royals waxay bilaabeen a ku ololeyn la gasho nadaafadaha nadaafadda ee NIINE Hindiya gudaheeda, halkaas oo dhaleeceyn dhab ah ay ku xiran tahay xilliyada. Intii lagu guda jiray tartankii IPL dhowaan, NIINE waxay siisay sagaal gabdhood seddex bilood oo gogol-xaashi ah oo fayadhowr oo loogu talagalay socod kasta oo dhibco ah, wadar ahaan 186 orod iyo 1,674 gabdhood.
Tags: advertisingSafiirkasax ahxaqiiqdabarack obamabidenCOVID-19abuurahakooxda kirikitkaguddi qaran oo dimuqraadi ahdncqirashadawaxyaabaha ay soo saaraan taageerayaashataageerayaasharaacsangatoradecagaaranWaan jeclahay kickboxingWaan codeyn doonaaInstagramMagaalada Los Angelesbaseball-ka ugu weynisbeddelada suuqgeyntaMLBniinemarka hore Pete alonsoRajasthan royalssailgpxafaayadaha nadaafaddawarbaahinta bulshadakafaalashojoornaalka ganacsiga isboortigaTwitterMacmiilka la soo saarayyoutubeYouTube channel